कसरी एउटा Gourmet Pretzel खाने? | Martech Zone
बिहीबार, अक्टुबर 18, 2007 बिहीबार, अक्टुबर 18, 2007 Douglas Karr
म Tuesday्गलबारमा म एउटा आँधीबेहरीबाट इण्डियानापोलिसबाट टम्पा अटलान्टा र फिर्ता इन्डियानापोलिस यात्रा गरें। त्यहाँ साथीहरू वा परिवारलाई भेट्न समय थिएन (मैले तिनीहरूलाई बोलाउन बोलाइन पनि) ... केवल एक बैठक र हावामा फिर्ता। हाम्रो उडानहरु संग बनेको थियो Airtran र म खुशी संग आश्चर्य थियो।
सायद उडानको सबैभन्दा ठूलो अंश मानार्थ प्रिटिज्ल्सको सानो झोलामा तल पुगिरहेको थियो र प्याकेज पढ्दै थियो:
म चलाख विज्ञापनको लागि एक शोषक हुँ र वास्तवमै यसबाट एक लात निकालियो!
टैग: 2011ब्लगवर्ल्ड एक्सपोBlogworld लस एन्जलसWordPress शीर्ष पट्टी
ब्लग कार्य दिवस: पानी र तेल
अक्टूबर २१, २०१ at २:०19 बिहान
तिमी म सँग जिस्केको! के यो गम्भीर प्याकेट हो ???? के तिनीहरू बिक्रीको लागि व्याकुल छन्? वास्तवमा यो एकदम छिटो छ र तपाइँको अनुहारमा ... मलाई यो मनपर्‍यो ... तर मैले यो पढे पछि विश्वास भएन।
त्यो अद्भुत छ। म पनि एक चुस्की हुँ। म झोला प्याकेजि ofको केवल बी / सी खान्छु र मलाई प्रिसेट पनि मनपर्दैन।
यो चलाख छ, म तिनीहरूलाई दिनेछु, तर चतुरले बिलहरू तिर्दैन। मलाई आश्चर्य लाग्छ यदि यसले बुकिंग उत्पन्न गर्दछ।
एयर ट्रानसँग निकै नासिड बजार / मार्ग संरचना छ, त्यसैले यो ग्राहक उत्पादनको प्रयासको सट्टा ग्राहकहरु सम्म पुग्ने प्रयास मात्र हुन सक्छ।
मैले केहि दिन अघि ओहायोबाट / ओर्लान्डो, फ्लाटको उडानमा केही दिन पहिले खाएको प्रिन्ट्जेलको झोलाको फोटोसहित तपाईंको पोष्ट देख्दा मेरो छक्क परेको कल्पना गर्नुहोस्! अचम्मको विज्ञापन, हैन त?
वास्तवमा, यो पोष्ट मेरो लागि एउटा राम्रो बहाना थियो तपाईंलाई टिप्पणी लेख्न किनकि मैले तपाईंको सम्पर्क फाराम प्रयोग गरेर सोधें कि किन मलाई मेरो ब्लगमा यसमा समस्या भइरहेको हुन सक्छ। मैले अनगिन्ती मानिसहरूलाई तपाईंको फारम प्रयोग गरेर मलाई टेस्ट सन्देश पठाउन आग्रह गरें तर यो कुनै कारणले काम गरिरहेको छैन। यो मेरो ईमेलमा आउँदैन।
केवल एउटा चीज मैले सोच्न सक्छु कि मैले तपाईंको सम्पर्क फाराममा राखेको ईमेल उही ईमेल हो जुन म मेरो व्यवस्थापक प्यानलमा प्रयोग गर्दैछु। के यो कारण हुन सक्छ?
किनकि तपाईंले आफ्नो सम्पर्क फाराम मार्फत मेरो सन्देशको जवाफ दिनुभएन, म यसमा कसैलाई समस्या भइरहेको छ कि भनेर चिन्ता गर्दैछु, मलाई समावेश गरी जो यसलाई प्रयोग गर्दै छ।
कृपया सल्लाह दिनुहोस।
अक्टूबर २१, २०१ at २:०23 बिहान
म पक्का छुईन के समस्या हुन सक्छ। मेरो सम्पर्क फाराममार्फत मलाई ईमेल गर्नुहोस् जुन तपाईं यसलाई पठाउँदै हुनुहुन्छ। प्लगइनले WordPress 'मेल क्षमता प्रयोग गर्दछ त्यसैले यो तपाईंको ब्ल्गले जस्तो सन्देश पठाउनुपर्दछ।
मैले अनुरोध गरेको जस्तो तपाईले गर्नुभयो र तपाईको सम्पर्क फाराम भर्नुभयो, मेरो सामान्य ईमेल ठेगाना (स्टीफन (at) sjhopson (dot) com) को प्रयोग गरेर मैले वास्तवमा तपाईको सम्पर्क फाराम मार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास गरें तर तपाईबाट कहिल्यै नसुनेकोले मलाई आश्चर्य लाग्छ। तपाईंको सम्पर्क फारममा केहि गलत छ।
मैले सम्पर्क फाराम मार्फत मेरो सन्देशमा लेखेको जस्तै मैले कहिले पनि माथि उल्लेखित ईमेल ठेगाना प्रयोग गर्‍यो, जो मेरो ब्लगमा तपाईंको सम्पर्क फाराम मार्फत मलाई पुग्न चाहने व्यक्तिले उनीहरूको सन्देश कहिले पनि पाएनन्। मैले तिनीहरूलाई कहिले पनि प्राप्त गरिन।
जहाँसम्म, जब मैले मेरो ईमेल ठेगाना sjhopson (at) yahoo (dot) com मा परिवर्तन गरें, मेरो साइटमा तपाईंको सम्पर्क फाराम मार्फत सन्देशहरू केवल राम्रो मार्फत आए।
के तपाईंलाई यो तथ्यसँग कुनै सरोकार छ कि स्टीफन (at) sjhopson (dot) com ठेगाना प्रशासकको ईमेल ठेगानाको रूपमा प्रयोग भईरहेको छ? के यसले यसको केहि गर्न सक्दछ?
म अचम्ममा छु, यो के हो भनेर पत्ता लगाउन सक्नुहुन्न जसले मलाई मेरो मुख्य ईमेल ठेगाना प्रयोग गर्नबाट रोक्दछ: स्टीफन (at) sjhopson (dot) com ठेगानाको रूपमा जुन तपाईंको सम्पर्क फारामले सन्देशहरू पठाउँदछ।
डेविना के ब्रेवर
नोभेम्बर २०, २००। 23::2009 अपराह्न
डगलस, म पनि AirTran pretzels द्वारा मोहित थियो। मार्केटिंग राख्नका लागि मात्र स्मार्ट तरीका, ब्रान्ड सन्देशहरू बाहिर।